Mitsangatsangana avy any Costa Rica mankany Etazonia: fameperana valizy vaovao
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mitsangatsangana avy any Costa Rica mankany Etazonia: fameperana valizy vaovao
Ireo mpitsangatsangana Costa Rica te-hitsidika an'i Etazonia, na hanao fifandraisana eo fotsiny, dia tsy maintsy mametra fameperana vaovao amin'ny valizy,
Ny olom-pirenena Costa Rican dia nanao an'i Etazonia ho iray amin'ny toerana itodiana azy indrindra rehefa mandeha any ivelany. Vao tsy ela akory izay no nanambarana fa ho an'ireo izay te-handeha ho any Etazonia, na hanao fifandraisana tsotra any, dia misy andiana fameperana vaovao amin'ny valizy, na valizy na kitapo itondran'ny mpandeha ao anaty tranon'ny fiaramanidina.
Anisan'ireo fepetra vaovao, voarara tanteraka ny mitatitra mihoatra ny 340 grama (mitovy amin'ny 12 Oz) ny vovo-dronono ao an-trano, ao anatin'izany ny makiazy, ary koa ny lafarinina, kafe, siramamy, talc, vovo-dronono, ary condiment . Ireo dia tsy maintsy apetraka amin'ny valizy voafaritra izay ho entina ao an-kibon'ny fiaramanidina fa tsy ho toy ny lahatsoratra mitondra.
Fanampin'izany, raha mividy vokatra vovoka ao anatin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Juan Santamaría ny mpandeha iray dia tsy maintsy apetraka ao anaty harona manokana misy tombo-kase fiarovana, izay tsy maintsy omena ao amin'ny magazay ividianana ny vokatra.
Ny vokatra sasany avela ao an-trano dia ny raika sy ny vovoka ilaina amin'ny antony ara-pitsaboana (miaraka amin'ny dokotera voamarina izay nitarin'ny dokotera). Ity fepetra ity dia manampy, amin'ny famerana misy amin'izao fotoana izao hitaterana ranon-javatra, tsifotra ary gel, izay tsy mihoatra ny 100 mililitera ary tsy maintsy miditra ao anaty harona plastika misy fanidiana (kitapo plastika ziplock, ohatra).
Ny ivon-toeram-pivoriana voalohany an'ny Las Vegas dia mandray ny vondrona voalohany
Ireo mpizahatany mpanao hetsi-panoherana dia nahatonga ny fianjeran'ny lamasinina teo akaikin'i Machu Picchu